DegDeg:Fanaan Mohamed BK oo raali galin ka bixiyey hadalkiisii – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DegDeg:Fanaan Mohamed BK oo raali galin ka bixiyey hadalkiisii
DegDeg:Fanaan Mohamed BK oo raali galin ka bixiyey hadalkiisii
Fanaan maxamed siciiid BK ayaa raali galain ka bixiyey hadalkii ui ka yidhi xafladii uu london ki qabtey waxaanu yidhi si xun wax i sheeg sixir waa ka daran yahay isagoo sii raaciyey Muqdisho waan jeclahay waanan tagayaa dhawaan ,
Waxaanan rabaa in aan show ku qabto oo wixii aan ka helo aan ku caawiyo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho. Mar la weydiiyey inuu raali galin ka bixiyo qaladkiisii wuxuu yidhi sidan.
Waan qaldamay ee marada ha la isaaro ,
Siyaasada iyo fanka ayaa iskay dhex galay dib danbe siyaasad uga hadli maayo
Sidaa waxaa yidhi maxamad bk .
‘Umada Somaliyeed waan ka raali galinayaa nin wayn cimaamada waa ka dhacdaa ee igu tuura cimaamada.
Markaaan ka imaado yurub waxaan tagayaa muqdisho oo aan show ku qabanayaa aan ku caawinaayo dadkii ku wax yeeloobow qaraxii afgooye waxaan fanaan somaliyeed ayuu sii raaciyey meelkasto somali jogtana wan tagayaa.
Ayax lagu arkay qeybo ka mid ah Gobolka Hiiraan